Internetka Mobile-ka Oo Laga Jaray Degmooyin Hore Leh Oo Ka Mid Ah Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Iyadoo habeen hore Internet-ka laga isticmaalo Mobile-ka laga waayey degmooyinka tirsan Hiiraan iyo Shabeellaha Hoose ayaa shalay ilaa xalay waxaa sidaas oo kale laga soo sheegayaa degmooyinka ka tirsan Galgaduud, Mudug iyo meelo ka mid ah koonfurta Soomaaliya.
Shirkadaha Isgaarsiinta ayaa gebi ahaanba joojiyey in ay bixiyaan adeega Internetka ee telefoonada gaar ahaan nooca loo yaqaan 3G. Amarkan ayaa ka shaqeeyey magaalooyinka iyo gobolada ay ka taliyaan Ururka al-Shabaab
Degmooyinka laga jaray Internet-ka Mobile-ka waxaa ka mid ah Ceeldheer, Ceelbuur, Galcad, Gal-hareere iyo Tuulooyin hoos yimaadda oo ka tirsan Galgaduud iyo Xarardheere oo ka tirsan oo ka tirsan gobolka Mudug.
Sidoo kale, waxaa Internetka laga jaray degmooyin iyo tuulooyin ku yaalla labada Shabeelle, Baay iyo Bakool, Hiiraan oo aheyd meeshii ugu horreysay ee laga dareemay Internet la’aanta iyo Jubooyinka.
Alshabaab ayaa horay usoo saaray amar shirkada Isgaarsiinta lagu faray iney muddo 15 maalmood ah ku jaraan Internet-ka laga isticmaalo taleefoonada gacanta, waxaana jaritaanka Internet-ku kusoo beegmay xilli mudadaasi dhamaatay.